फेरि पनि कुर्सीकै महाभारत ? | चितवन पोष्ट दैनिक
फेरि पनि कुर्सीकै महाभारत ?
२०७० माघ १४, मंगलवार ०३:२७ गते
दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गरेको कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विषयलाई लिएर रडाको मच्चियो । पार्टीको सभापति नै संसदीय दलको नेता पनि हुने परम्परा हुँदाहुँदै उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पनि आकाङ्क्षा राखेपछि समस्याले उत्कर्षता प्राप्त ग¥यो ।
अन्ततः त्यस समस्यालाई पार लगाउन आनन्द ढुंगानाको अध्यक्षतामा निर्वाचन समिति गठन गरी लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गरियो र सुशील कोइरालाले त्यस निर्वाचनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई हराउन सफल भए । तर, सर्वसम्मतिलाई छाडेर यस्तो पद्धतिमा जान पार्टीका दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका नेता तथा अन्य तमाम कार्यकर्ताहरु नचाहँदा नचाहँदै बाध्य भए ।
दोस्रो ठूलो दलभित्र पनि संसदीय दलको नेता चयनको विषयलाई लिएर आ–आप्mनै प्रकारले लविङ सुरू भयो । विगतमा पार्टीको अध्यक्ष नै स्वतः संसदीय दलको नेता हुने परिपाटीलाई तोड्दै यस पटक यस्तो लविङ सुरू भयो । जुन पद्धति आफैँमा नराम्रो नहुँदाहुँदै पनि यसले भोलिका दिनमा समेत समस्या सिर्जना गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । नजिकिँदै गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आ–आप्mनो लविङलाई मजबुत गराउने अभिप्रायले गरिएको यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्र र जनवादी केन्द्रीयता दुवैलाई क्षति पुग्ने विज्ञहरुको ठहर छ ।
तेस्रो ठूलो दल एनेकपा माओवादीभित्र पनि विवादको घना बादल फाटिसकेको छैन । अध्यक्ष प्रचण्डले आप्mनो उत्तराधिकारीका रुपमा कृष्णबहादुर महरालाई अघि सार्ने भएपछि डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आप्mना निकट टोपबहादुर रायमाझीलाई अगाडि सारेपछि विवाद पैदा भयो । यसलाई शान्त पार्न अध्यक्ष आफैँ नै अग्रसर भएको देखियो । उनले अग्रसरता देखाए पनि यो समस्याले आगामी दिनमा पार्टीभित्र अरु समस्यालाई निम्त्याउने देखिन्छ । अहिले नै देखिएका समस्याहरु त्यसै टुङ्गो लाग्ने स्थिति देखा पर्दैन ।
‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’को उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै संसदीय दलको नेता छनोटमा सर्वाधिक विवाद कांग्रेसमा देखा प¥यो । यही स्थिति नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीमा पनि देखा प¥यो । देशका जटिलतम समस्या एकातिर छन्, तिनमाथि नजरअन्दाज गर्दै नेताहरु कुर्सी हत्याउनमै केन्द्रित रहिरहँदा जनतामा चरम राजनीतिक निराशा पैदा हुन थालेको छ । अहिले देशको समस्या समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त जनादेशको मर्मलाई कांग्रेसले राम्ररी बुझेर तदनुरुप व्यवहार गर्नुपर्ने जनताको अभिमत छ । फुटेर होइन एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सकेमा मात्र देशको समस्या समाधान हुन सक्छ र यसमै मूलतः कांग्रेसीजन र देशको पनि भविष्य सुखद हुन सक्छ ।
एनेकपा माओवादीप्रति पूर्णतः आशावादी हुँदै उसलाई जनताले २०६४ सालमा जिताएर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्रदान गरे । सबैभन्दा ठूलो दल भएको अभिमानमा उसले जनताकै आदेशलाई कुल्चँदै थुप्र्रै अलोकप्रिय काम ग¥यो र जनता उसबाट निराश भए, अनि रूष्ट पनि । फलतः २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा उसलाई पहिलोबाट झारेर तेस्रो दलको मात्र हैसियत दिए भने उसको हैसियतचाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई । जनताले एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्ने र त्यसपछि आर्थिक क्रान्तिको मार्गमा गतिशील भई लाग्नका निम्ति कांग्रेसलाई त्यसको नेतृत्व गर्न र नेकपा एमाले तथा एनेकपा माओवादीलार्ई सहकार्यात्मक भूमिका खेल्न जनादेश प्रदान गरेका छन् ।
दोस्रो निर्वाचनको परिणाम प्रकाशनमा आएताका उत्साहित भएका जनता दलहरुका विभेदपूर्ण रुपमा गरिएको समानुपातिक सभासद् छनोट प्रक्रियाबाट रूष्ट भएका थिए । यसपछि पनि झन् दलहरुका सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक खेलहरुप्रति पुनः घृणा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले जनतालाई ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन थालेको अनुभूति भएको छ ।
अनावश्यक विवाद र उल्झनमा परी समय बर्बाद गर्नमा अभ्यस्त बनेका दलहरुले समयको मह¤वलाई त बुझेनन् नै, राष्ट्रिय दायित्वलाई पनि पटक्कै सम्झेनन् । हिजो पनि मात्र व्यक्ति स्वार्थमा निर्लिप्त रहे र आज पनि त्यसैको निर्लज्ज पुनरावृत्ति गरिरहेछन् । नेपालको यो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको फाइदा लिई स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरु नेपालको अस्मितामाथि खेलिरहेका छन् । उनीहरु प्राकृतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा आप्mनो हक जताउने भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेछन् । सकेसम्म यो देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने र यसमा अहिले सफल हुन नसके पनि यसका सम्पूर्ण साधनस्रोतमा एकाधिकार कायम गर्ने उनीहरुको योजना हो र जसमा उनीहरु प्रायः सफल बन्दै आएका छन् । यसलाई दलहरु र तत्तत् दलका नेताहरुले अनदेखी गरिरहेका छन्, जुन यो देश र जनताका निम्ति ज्यादै महँगो साबित हुने निश्चित छ ।
दलहरुका बीचमा छलफल हुनु स्वाभाविक छ । पदको समानुपातिक वितरण पद्धतिको विकास हुनु पनि उत्तिकै सर्वमान्य नै छ । तर, छलफलका नाउँमा कहिल्यै फलचाहिँ आउँदै नआउने केवल छलैछल मात्र आउने गर्दा पनि देशको आन्तरिक समस्याले कहिल्यै निकास पाउनै सकेन । नेताहरु राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा धेरैभन्दा धेरै भए गुटगत, नत्र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै नसक्दा नै देशले यो नियति भोग्नु परेको तीतो यथार्थ हो ।
न्यूनतम मानवीय मूल्य तथा नैतिकतालाई मात्र पनि ध्यानमा राखेर हेर्ने राजनीतिक चरित्रको खडेरी पर्दै गएको छ भन्दा किमार्थ अतिशयोक्ति होला भन्ने लाग्दैन अहिले । यद्यपि, राजनीतिमा यस्तै हुन्छ भन्नेहरुको पनि ठूलै हूल नभएको होइन । तर, यस्तैयस्तै नभई कम्तीमा राजनीतिक संस्कार र संस्कृति त जरूरी हुन्छ नै । त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरी किमार्थ राजनीतिक चरित्रता भनेर पन्छाउनु न्यायोचित ठहर्दैन । मानक रुपमा भन्दा पनि त्यस्ता धेरै उदाहरणहरु वर्तमानमा पनि पाउन सकिन्छ, जहाँ राजनीतिक संस्कृति र सुसंस्कार विद्यमान रहिआएका छन् । त्यस्ता सुन्दरतम दृष्टान्तहरुमा पर्दा हालेर आप्mनो भयङ्कर कालो छोप्न अर्काको आङको कालोतिर चोर औँलो ठड्याउने प्रवृत्ति उपयुक्त मान्न सकिन्न ।
देशमा उत्पन्न समस्यालाई देशभित्रै समाधान गर्ने उपायको खोजी नगरी विदेशी भूमि र प्रभुको सहारा लिन खोज्दा पैदा भएको समस्यालाई समयमै निराकरण गर्न नसके यसले अहिले अल्सरको मात्र स्वरुप धारण गरेको छ, भोलि प्रलयङ्कारी क्यान्सरको रुप नलेला भन्न सकिन्न । यसर्थ, आप्mना अत्यन्त नीचतापूर्ण स्वार्थलाई त्याग्नैपर्छ र सर्वमान्य पद्धति र परम्पराको निसर्त विकास हुनैपर्छ ।
संसदीय दलको नेता चयनमा उत्पन्न विवाद अहिलेको जस्तै चुनाव पद्धतिबाट खोज्दै हिँडे भोलि स–सानो समस्याहरुमा पनि यस्तै विवाद र तनाव पैदा भई अन्ततः चुनावबाटै छिनोफानो गर्ने र त्यसै जितहारलाई लिएर वर्षौंवर्षसम्म तुष पालेर राख्ने मौका छोपेर प्रतिशोध साँध्ने विकृत मनोविज्ञान पैदा हुन सक्छ । यस कुरामा दल र दलभित्रका सबै नेता तथा नेतृत्ववर्गले बुझी आउँदा दिनमा सर्वसम्मतिकै पद्धतिबाट यसको निकास निकाल्नु आवश्यक छ ।